बिहान नुहाउनुहुन्छ कि बेलुकी ? बेलुकी नुहाउदा हुन्छ यस्ता फाइदा ! - Rising Dainik
बिहान नुहाउनुहुन्छ कि बेलुकी ? बेलुकी नुहाउदा हुन्छ यस्ता फाइदा !
December 14, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on बिहान नुहाउनुहुन्छ कि बेलुकी ? बेलुकी नुहाउदा हुन्छ यस्ता फाइदा !
एजेन्सी/ छालाको इन्फेक्सनबाट मुक्त हुन : प्रायः मानिसले बेलुकी हातखुट्टा सफा गरेर सुत्ने गर्छन् । यति मात्र नभएर सुत्नुअघि नुहाउनु निकै जरुरी भएको स्किन एक्सपर्टहरू बताउँछन् । खासगरी गर्मी मौसममा बेलुकी नुहाउँदा निकै फाइदा हुन्छ । किनभने, दिनभर काम गर्दा शरीरमा फोहोर जम्मा भएको हुन्छ । जसका कारण छालामा इन्फेक्सन हुने ख’तरा हुन्छ । त्यसैले सुत्नुअघि नुहाउँदा शरीर सफा मात्र नभएर विभिन्न सं’क्रमणबाट पनि बच्न मद्दत पुग्छ । यस्तो बानीले छाला कोमल बन्न पनि सघाउँछ ।
2.आरामदायी निद्रा : सुत्नुअघि नुहाउँदा आरामदायी निद्रामा सहयोग पुग्छ । यसले दिनभरको थकानबाट मुक्त हुन सहयोग मिल्छ । तपाईंले नुहाउने पानीमा सुगन्धित तेलका केही थोपा राख्न पनि सक्नुहुन्छ । यसरी नुहाउँदा तपाईंलाई रिल्याक्स फिल हुन्छ । तेलले छालाका लागि मोस्चराइजरको पनि काम गर्छ । 3.तौल कम गर्न : नुहाउने समय शरीरको क्यालोरी पनि केही मात्रामा जलेर जान्छ, जुन तौल घट्ने पहिलो स्टेप हो । त्यसैले बेलुकी नुहाउँदा मोटोपनबाट मुक्त हुन पनि सहज हुन्छ ।
4.मुड ठीक राख्न : दिनभर काम गर्दा स्वाभाविक रूपमा मानिसले थकाइको अनुभूति गर्छ । थकाइले मानिसको मुड पनि खराब गर्छ । अनि स–साना कुरामा पनि रिस उठ्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले थकाइलाई टाढा राख्ने गतिविधि गर्न आवश्यक हुन्छ । थकाइबाट मुक्त हुँदा तपाईंको मुड पनि ठीक ठाउँमा आउँछ र तपाईंको स्फूर्ति जाग्न थाल्छ । थकाइ र प्रदूषणबाट मुक्त हुन रातमा नुहाएर फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ ।
5.बिहान नुहाउँदा : यसमा दुई मत छैन कि नुहाएर दिनको सुरुवात गर्नु निकै राम्रो हुन्छ । बिहानको समय नुहाउँदा तपाईंको इनर्जी लेभल पनि बढ्छ । यस्तो गतिविधिले शरीरको तापक्रम सन्तुलित राख्ने कामसमेत गर्छ । अझ बिहानको वर्कआउटपछि नुहाउन अनिवार्य छ ।
ओलीले अझैँ पट्याउन सकेनन् प्रचण्डलाई !
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” [ भिडियो सहित ]
February 2, 2021 February 2, 2021 Ramash Kunwar
म्यासेन्जर च्याटमा यौ’न सम्बन्ध राख्ने प्रस्ताव राखेर जङ्गलमा भेट्न पुग्दा…..